iza isika - TAIZHOU HEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
HEYA MOLD - Manokana amin'ny
Manamboatra lasitra plastika
Manana ekipa matihanina R&D izahay, hampivelatra sy hamboarina ny bobongolo plastika ho an'ny mpanjifantsika araka ny filan'izy ireo sy ny fangatahana mifototra amin'ny zavatra niainanay nandritra ny 10 taona.
TWe mifantoka amin'ny tsipiriany fanodinana rehetra amin'ny lasitra fanindronana plastika miaraka amin'ny masinina fanodinana sy fitaovana fanaraha-maso mandroso indrindra, manome lasitra plastika avo lenta ho an'ny mpanjifa.
Mifantoka amin'ny famolavolana vokatra plastika avo lenta ho an'ny tsenan'ny indostria plastika manerantany isika. Ny lasitra plastika dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Ny orinasan'i Heya dia mifantoka amin'ny famokarana lasitra plastika manana traikefa mihoatra ny 10 taona. Toy ny bobongolo ao an-trano, bobongolo amin'ny tsindrona ao an-dakozia, fitaovana famolavolana kojakoja ao an-trano, lasitra fampidirana indostrialy sy fambolena sns.
Miaraka amin'ny fahaizantsika sy ny fahaizantsika, fanatanterahana am-pahombiazana ny fanaingoana manokana sy ny vahaolana bobongolo tokana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa no tanjon'i Heya Mould. Ho an'ity tanjona ity dia manizingizina ny famolavolana lasitra plastika avo lenta sy mahazatra ny Heya Mould, manolotra firafitra lasitra plastika mety sy milamina kokoa izay mora kokoa amin'ny fampandehanana sy fikojakojana ny mpanjifa.
Izahay dia manaraka fomba farany amin'ny tetikasa tsirairay. Ny mpanjifanay dia mahita hatrany ny fitomboan'ny fifamoivoizana, ny tsy fivadihana amin'ny marika ary ny fitarihana vaovao noho ny asanay.